Vacuum Concentrator, Electroplated Paddle fanamainana, Blade fanamainana - Yanjialong
DW andian-dahatsoratra single sosona fehikibo fanamainana
Single vokatry wastewater evaporator
Single vokatry ny fampiasana evaporator wastewater: fitaovana ity dia mety ho fanafody, niteraka, sakafo, simika sy ny orinasa hafa, ary matetika no ampiasaina ho lasa etona ny nentin-drazana Shinoa fanafody voajanahary koa omen'ny, voankazo juices, tsara simika vahaolana, sns Features: a. Voalamina tsara rafitra sy ny faritra rihana kely. Nikosokosoka fametrahana mazava tsara tao anatiny sy ivelany ny fitaovana, mifanaraka amin'ny takian'ny GMP. b. Ny fitaovana dia tena ahitana ny heater, ny Separator, ny defoamer, ny condenser sy ny toy izany. d ....
YZGFZG series vacuum fanamainana
YZG / FZG vacuum fanamainana andian-dahatsoratra Fampidirana: Ny antsoina hoe vacuum paharitry dia ny maina ny fanazavana eo ambanin'ny toe-piainana vacuum, ary raha ny banga paompy dia ampiasaina noho ny pumping sy dehumidifying,-paharitry ny tahan'ny dia haingana. Fanamarihana: Raha misy condenser no ampiasaina, ny solvent ao amin'ny zavatra mety ho sitrana ny condenser; raha toa ny andian-dahatsoratra SK peratra vacuum paompy rano no ampiasaina, ny condenser azo nesorina, ny fampiasam-bola angovo fahavaratra. vokatra Famaritana: YZG / FZG andian-dahatsoratra fanamainana vacuum banga voasakantsakan'ny an'ny fanamainana. Ny dr ...
Vacuum decompression concentrator Voalohany, ny tafiditra amin'ny fampiharana ity dia mety ho fitaovana ny fitanan'i ny ranon-javatra ao amin'ny fanafody, sakafo, simika sy ny orinasa hafa, ary azo ampiasaina toy ny toaka sy tsotra fanarenana reflux fitrandrahana. Ny ampahany ao amin'ny fifandraisana miaraka amin'ny fitaovana dia vita amin'ny Stainless vy, izay manana harafesiny tsara fanoherana sy nihaona GMP fitsipika. Faharoa, ny fitaovana fanaovana ny fitaovana no tena ahitana ny fitanana tanky lehibe vatana, zavona-ranon-javatra ...
Double vokatry concentrator
Double vokatry concentrator Voalohany, ny tafiditra amin'ny fampiharana ny concentrator dia mety noho ny fitanana ny ranon-javatra toy ny fanafody nentim-paharazana sinoa, andrefana fanafody, gliokaozy, hydroéthylamidon, monosodium glutamate, zavatra vita amin'ny ronono, zavatra simika, sns, ary indrindra mety ho ambany hafanana vacuum fitanana ny hafanana saropady fitaovana. Rehefa kajy tsara sy tsara endrika, ny orinasa manana tombontsoa bebe kokoa noho ny tany am-boalohany endri-javatra. Faharoa, ny fitaovana fanaovana ny roa-vokany ...
Telo-vokatry concentrator Voalohany, ny tafiditra amin'ny fampiharana ny concentrator dia mety noho ny fitanana ny ranon-javatra toy ny fanafody nentim-paharazana sinoa, andrefana fanafody, gliokaozy, hydroéthylamidon, monosodium glutamate, zavatra vita amin'ny ronono, zavatra simika, sns, ary indrindra mety ho ambany hafanana vacuum fitanan'i ny hafanana saropady fitaovana. Rehefa kajy tsara sy tsara endrika, ny orinasa manana tombontsoa bebe kokoa noho ny tany am-boalohany endri-javatra. Faharoa, ny fitaovana fanaovana ny telo-vokany C ...
Boribory concentrator Voalohany, ny tafiditra amin'ny fampiharana ity dia mety ho fitaovana ny fitanan'i ny ranon-javatra ao amin'ny fanafody, sakafo, simika sy ny orinasa hafa, ary azo ampiasaina toy ny toaka sy tsotra fanarenana reflux fitrandrahana. Ny ampahany ao amin'ny fifandraisana miaraka amin'ny fitaovana dia vita amin'ny Stainless vy, izay manana harafesiny tsara fanoherana sy nihaona GMP fitsipika. Faharoa, ny fitaovana fanaovana ny fitaovana no tena ahitana ny fitanana tanky lehibe vatana, zavona-ranon-javatra Separator, ...
Coil vacuum concentrator Voalohany, ny tafiditra amin'ny fampiharana ny fitaovana dia mety ho fitaovana fitanana ny rano toy ny fanafody nentim-paharazana sinoa, andrefana fanafody, sakafo, monosodium glutamate, ronono, gliokaozy, hydroéthylamidon, ranom-boankazo, simika sy ny toy izany. Faharoa, ny fitaovana fanaovana ny fitaovana dia cylindrical mamehy fitaovana amin'ny mafana insulation palitao, izay vacuumed tamin'ny tsotra sy mahomby hydraulic ejector. Ny fitaovana dia vaky ho telo toko, ny etona chambe ...
Toaka famerenana concentrator
Famerenana ny toaka concentrator Voalohany, ny tafiditra amin'ny fampiharana fitaovana ity dia mety ho fanafody, niteraka, sakafo, simika sy ny orinasa hafa. Izany no matetika ampiasaina ho lasa etona ny nentin-drazana Shinoa fanafody voajanahary koa omen'ny, tsara simika vahaolana, sns izany indrindra mety ho lasa etona sy fampahiratana amin'ny organika ranoka mandevon-javatra. Faharoa, ny fitaovana fanaovana ny fitaovana no tena ahitana ny heater, ny evaporator, ny defoamer, roa condenser, ny mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any, ny ranon-javatra fandraisana ton ...
Fitsipika miasa ny evaporator misy effets telo ho an'ny rano maloto be sira
Ny evaporator telo-effets dia karazana fitaovana fitrandrahana sy fifantohana, izay be mpampiasa amin'ny fitrandrahana sy ny fizotran'ny fitrandrahana akora simika toy ny fanafody, simika, sakafo ary indostria maivana. Ny fotoana fanafanana ara-batana dia fohy, ny hafainganam-pandehan'ny evaporation dia haingana, t ...
Ny tsenan'ny varingarina sy fantsona oksizenina dia hanatri-maso ny fitomboana avo indrindra eran-tany amin'ny 2019-2025
Tombam-bidy ho an'ny varingarina sy concentrator oksizenina, famakafakana feno ary fizarana sy tsenan'ny tsena lehibe, 2019-2025. Ny varingarin'ny oxygen sy ny tsenan'ny concentrator dia loharanom-pahalalana sarobidy ho an'ireo mpahay tetikady. Manome fandinihana ny fitomboan'ny tsena ho an'ny indostria ...
Fanadihadiana sy fampitahana ireo tombony sy fatiantoka entin'ny evaporator sarimihetsika lavo
Ny evaporator sarimihetsika mianjera dia karazana fitaovana fanaraha-maso avo lenta, izay antsoina miaraka amin'ny evaporator sarimihetsika manify miaraka amin'ny evaporator sarimihetsika miakatra sy evaporator sarimihetsika. Ireo evaporator sarimihetsika manify dia manana tombony lehibe ary be mpampiasa amin'ny akora simika, indostrian'ny hazavana ary foo ...
Fitsipika momba ny evaporator miparitaka an-keriny
Ny evaporator mivezivezy an-tery dia evaporator izay miankina amin'ny hery ivelany hivezivezy. Ny evaporator mivezivezy an-keriny dia mety kokoa amin'ny fanamaivanana ny kristaly, fanodinkodinana, fifantohana avo, viscosity avo, ary rano maloto tsy voavolavola sy ranon-javatra maloto. mifantoka. ...
Ny fisiana sy iraka an'ny evaporator MVR
Ny evaporator MVR dia karazana fitaovana fanamafisam-peo mahomby sy mahavonjy angovo izay ampiasaina amin'ny indostrian'ny pharmaceutika. Ny teknolojia dia mampiasa teknolojia haingam-pandrefesana ambany sy ambany ary angovo madio hamokarana etona ho angovo hampisaraka ny rano amin'ny mpanelanelana. Izy io dia ao amin'ny ...
© Copyright - 2010-2022: Zo rehetra voatokana. Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - DIEM Mobile
Single Effect Vacuum Concentrator , Single Layer harato Belt fanamainana, Double Effect Concentrator , Single Effect Concentrator ,